Lakkoobsi Lammiiwwan Itiyoophiyaa Gargaarsa Barbaadan Dabale: OCHA
Hagayya 22, 2017
Lakkoobsi isaanii miliyoona sadiin kan dabale Itiyoophiyaa keessaa kanneen hongeen miidhamaniif gargaarsi barbaachisu ariifachiisaa ta’uu fi ammuma argamuun kan irra jiraatu ta’uu OCHAN beeksiseera.
OCHAN kana kan beeksise dhiyeenya kan ifa taasisame galmee gargaarsi ittiin gaafatame bu’uura godhachuu dhaani. Dhiyeenya kan ifa taasisame galmeen gargaarsa ittiin gaafatan HRDn akka mul’isetti sababaa hongee mudateen lakkoobsi lammiiwwan Itiyoophiyaa gargaarsa barbaadanii akkaan dabale.
Waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaatti dubbi himaan biiroo Itiyoophiyaa Choice Okoro isuma kan cimsuun dubbatan.
Kan argaa jirru lakkoobsi gargaaramtootaa miliyoona sadii fi isaa oliin dabaluu isaa ti. Gamaaggama walakkeessa waggaa ittiin ka’umsa godhachuu dhaan yeroo bara 2017 isa hafeef lakkoobsi ifa taasisame isa kana.
Miliyoona sadiin kan dabale Amajjii bara 2017 kan ifa taasisame waliin ennaa ilaalamu.
Amajjii bara 2017 lakkoobsi kun miliyoona 5.6 ture. Amma kan argaa jirru miliyoona 8.5. kanaaf miliyoona sadiin dabaluu isaa tilmaamaa jirra. Dhimmootiin ilaalcha barbaadanis akkuma jirutti jiru. kan ijoollee mudatu hanqinni nyaata madaalamaas dhimma ilaalchi kennamuufii qabu. Dhukkubi Haqqisaa fi garaa kaasaa ariifachiisaanis akkuma duraaniitti jira. Waa’een midhaan nyaataas yaaddessaa dha.
Dhimmi inni ijoon isa kana. Waa’een nyaataa dursi kennamuufii qaba. Lakkoobsi gargaaramtootaas dabaleera. Maallaqi deebii kennuuf barbaachisus dabaleera jedhan.